विषादी नियन्त्रणमा नेपाल जापान र काेरयाभन्दा अगाडि- कृषिमन्त्री खनाल – Everest Dainik – News from Nepal
विषादी नियन्त्रणमा नेपाल जापान र काेरयाभन्दा अगाडि- कृषिमन्त्री खनाल
काठमाडौं, माघ २३ । व्यवस्थापिका सदनमा सांसदहरुले विषादीको प्रयोगबारे कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन् । सांसद रामबाबु विष्टले प्रश्न गरे– कृषि मन्त्रीज्यू, नेपाली जनताले विषादी रहित तरकारी र फलफूल कहिलेदेखि खान पाउँछन ?
यस्तो थियो कृषिमन्त्री खनालको जवाफः
कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालः नेपाली जनताले विषादीरहित तरकारी र फलफूल कहिलेदेखि खान पाउँछन ? भन्ने विषयमा लामो कुरा गर्नुभन्दा खासगरेर हाम्रो विषादी ऐन २०४८ लागु छ र त्यसलाई अहिले पुनर्लेखन अहिलेको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने भएकोले अहिले सम्बन्धित समितिमा छलफलका क्रममा छ । विषादीसम्बन्धी कानुनी नियमन अहिले ०४८देखि अहिलेसम्म विषादीका क्षेत्रमा देखिएपछि त्यो ऐनको केही बुँदाले जरिवाना दण्ड र कैद अपुग रहेकोले अहिलेको विषादी नियमन गर्न नसक्ने भएकोले त्यो नयाँ विधेयक अब सदनमा आउने क्रममा छ ।
अहिले सामान्यतः हाम्रो मन्त्रालयमा रहेको र छिमेकी देशबाट आउने विषादीको अवस्था राम्रो सुधिदै गएको स्थिति हो । नेपालमा २०५० ५१ बाट निकै प्रयोगमा आएको र ०६५ पछि क्रमशः घटदै गएको अवस्था छ । २०७१ को तथ्यांकले करिब ८२ देखि ८९ प्रतिशतसम्म स्वच्छ र खानयोग्य नमूना परीक्षण गर्दा गत ६ महिनाभित्रको नमूना जाँच गर्दा दुई वटा नमूना मात्रै खान योग्य देखिएनन । यसको अर्थ ९९ प्रतिशत विषादीरहित छन ।
तर नेपालमा विषादीको अवस्था वेमौषमीको खेती शुरुभएपछि यसको प्रयोग बढी भएको छ । यो जनचेतनाको पनि विषय हो । खुला सीमानाका कारण उत्पादन बृद्धिका लागि प्रयोग नगरी नहुने अवस्था छ । विषादी चार प्रकारका छन् । हामीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएका छौं । नेपालमा विषादीको प्रयोगलाई हेर्दा दक्षिण कोरिया र जापानको तुलनामा हामीले कम प्रयोग भएको पाइन्छ । व्यवसायिकरुपमा खेती गरिएका स्थान हेर्दा सुरक्षित नै मानिन्छ । तर यसो भनिरहँदा यसक्षेत्रमा ठीक किसिमले कदम चालिएन भने बिकराल रुप लिन सक्छ । त्यसैले अहिले जैविक विषादीको विकास गर्न प्रांगारिक स्थितिको अध्ययन गर्न समिति नै गठन भएको छ । मेरो नेतृत्वको यो समितिले आगामी वर्षदेखि प्रांगारिक अभियान जस्तै बनाउने लक्ष्य छ ।
चोरबाटोबाट पनि प्रतिबन्धित औषधी आएका छन । यसका लागि नाका नाकामा जाँच गर्ने, परीक्षण गर्ने र त्यसका आधारमा नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
ट्याग्स: Charapani Khanal